寸 dia kanji ampiasain'ny fiteny sinoa, ny fiteny koreanina, ary ny fiteny Japoney. Ao amin'ny teny Japoney, ity kanji ity dia voasokajy anaty sokajy kanji lazaina hoe toyo kanji na kanji fampiasa.
Ny fanononana pinyin an'ity sinôgrama ity dia cùn (cun4) Tsindraindray afohezina ho Wade, ny Wade-Giles dia romanizasiôna ny fiteny mandarina. Io romanizasiôna io dia nampiasain'i Thomas Wade teo anivon'ny taonjato faha 19 ary novain'i Herbert Giles tao amin'ny rakibolany sinoa-anglisy tamin'ny 1912 ; io romanizasiôna io no nampiasain'i Taiwan sy ny tontolo miteny anglisy mandritry ny taonjato faha 20.
Ny fanononana Wade-Giles an'ity hanzi ity dia cun4
Amin'ny ankapobeny, ny fiteny kantoney dia teny tenenina fa tsy teny soratana. Ny fiteny kantoney tenenina dia samihafa amin'ny fiteny sinoa soratana ankehitriny, endrika soratana an'ny fiteny mandarina tsotra. Ny feo avoakan'ny fiteny sinoa koa dia samihafa be sady lavitra amin'ny feo avoakan'ny fiteny kantoney. Amin'ny fotoana mandeha, nilaina no nahazo teny tenenina mirindra amin'ny fiteny soratana. Noho izany dia mampiasa sinograma manokana ho an'ny fiteny kantoney. Maro amin'ny sinograma Kantoney no tsy manana sanda mitovy amin'ny mandarina. Tsy azon'ny tsy mpiteny kantoney ny fiteny kantoney, na dia kantoney soratana aza, satria izy mampiasa fitsipi-pitenenana sy volana tsy mitovy amin'ny mpiteny mandarina. Ny fanononana ity sinograma ity amin'ny teny kantoney dia chyun3
Hangul : 촌 (ch'on)
on’yomi : すん (sun), そん (son)
kun’yomi : はかる (hakaru), とき (toki), き (ki)
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=寸&oldid=601692"	Sokajy : KanjiHanzi sinoaHanja koreana	Menu de navigation